खुसीको खबर: अब गर्भवती महिलाले पनि रुपैयाँ पाउने ! «
खुसीको खबर: अब गर्भवती महिलाले पनि रुपैयाँ पाउने !
Published : 25 January, 2020 7:37 pm
अब गर्भवती महिलाले पनि भता १५ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन् । झापाको बाह्रशदी गाउँपालिकाले गर्भवती महिलालाई एक हजार ५०० रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद दाहालका अनुसार गाउँपालिकाभित्र रहेका स्वस्थ्य संस्थामा गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य जाँच गराउन र भिडियो एक्स–रे गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सबै गर्भवती महिलालाई प्रोत्साहनस्वरुप भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय भएको हो ।
कतिपय गर्भवती महिलामा चेतनाको कमी र आर्थिक अभाव हुँदा उनीहरुले नियमित गर्भ जाँच नगराउने भएकाले नियमित गर्भ जाँच गराउन प्रोत्साहन दिँदै आर्थिक सहयोग गर्न लागिएको बताइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाहालले भने, ‘प्रोत्साहन रकम लिने गर्भवती महिलाले नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउनु पर्ने हुन्छ ।’